Undwendwela njani i-Saudi Arabia isuka e-UAE, eMzantsi Afrika, eArgentina kwakhona?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » Undwendwela njani i-Saudi Arabia isuka e-UAE, eMzantsi Afrika, eArgentina kwakhona?
isikhululo • Iindaba eziQhelekileyo zaseArgentina • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
ISaudi inyusa ukuvalwa kokuhamba
Ubukumkani obuvaliwe kwaye obuyimfihlakalo baseSaudi Arabia ngoku buyaziwa njengelona lizwe linobuhlobo kwezokhenketho emhlabeni.
Ilizwe lithatha indawo ephambili kubunkokheli bezokhenketho kwihlabathi.
Namhlanje iSebe Lezasekhaya laseSaudi liqinisekisile ukuba liza kuvula ubukumkani kummelwane, i-United Arab Emirates, eMzantsi Afrika naseArgentina.
Ukuhamba kuya kuvunyelwa kwakhona phakathi koBukumkani baseSaudi Arabia kunye ne-United Arab Emirates, uMzantsi Afrika, neArgentina ukusukela ngoLwesithathu, nge-8 kaSeptemba XNUMX. La mazwe asuswe kuluhlu olubomvu lokuhamba kobukumkani.
Isigqibo sokususa isibhengezo sokuhamba sisekwe kuvavanyo lwemeko yangoku ye-COVID-19 eBukumkanini, ucacisile uMphathiswa.
UMphathiswa Wezangaphakathi wathi indlela yokumisa usulelo lwe-COVID-19 ekusasazeni yayikukuqhubeka nokwenza amanyathelo othintelo, njengokugqoka imaski, ukudibanisa intlalontle kunye nococeko.
Ukusukela namhlanje, ngolwe-Lwesibini, nge-7 kaSeptemba, ngo-2021, bekukho amatyala ama-138 amatsha e-COVID-19 kunye nabantu abayi-6 abasweleke ngenxa yecoronavirus. Ukuza kuthi ga ngoku, amatyala angama-545,505 axeliwe kwaye abantu abangama-8,591 baswelekile.
Benza ntoni uBukumkani ngoku
Okwangoku, iSaudi Arabia inyanzelisa iphulo lokugonya ukufezekisa ukhuseleko lomhlambi we-70% yabemi begonywe ngokupheleleyo. Ukuza kuthi ga ngoku, ilizwe liphumelele iipesenti ezingama-45 zokugonyelwa ngokupheleleyo kwaye ama-63% afumene idosi yokuqala. Urhulumente ulindele ukuba afumane ukhuseleko lomhlambi ekuqaleni kukaNovemba.
Ukongeza kwinkqubo yokugonya, ilizwe liseke iindawo zokuvavanya kunye namaziko onyango, ukunceda amakhulu amawaka abantu.
Kwinyanga nje enesiqingatha eyadlulayo
Ekupheleni kukaJulayi ka-2021, iSaudi Arabia yayisete iminyaka emi-3 yokuthintelwa kohambo kubemi bayo ukuba bayaphula umthetho obekiweyo kwaye baya nakweliphi na ilizwe kuluhlu "olubomvu" loBukumkani. Ukongeza kwisibhengezo sokuhamba seminyaka emi-3, izohlwayo ezinzima ziya kubekwa ekubuyeni.
Okubandakanyiweyo kolo luhlu lokuvalwa kokuhamba amazwe ayephakanyiswa ngomso- i-UAE, uMzantsi Afrika, neArgentina.
Yintoni efunekayo ukuya eSaudi Arabia?
Ukusukela nge-1 ka-Agasti ka-2021, ISaudi ivulekele ukugonywa abatyeleli bamanye amazwe uhamba ngevisa yokundwendwela. Abahambi baya kudinga ukuba ne-inshurensi ye-COVID-19 ngelixa bese-Kingdom. Iindleko zale inshurensi ziya kubandakanywa kwimirhumo ye-visa yabakhenkethi. Ukujonga ukufaneleka kwelizwe kwinkqubo ye-eVisa ngokujonga uluhlu olukhoyo Iphepha leVisaSaudi. Onke amazwe angadweliswanga anokufaka isicelo seVisa yabakhenkethi kwiNdlu yoZakuzo yaseSaudi Arabia ekufuphi nge-www.mofa.gov.sa
Zonke iindwendwe ezifika kweli lizwe nge-visa esebenzayo yokhenketho kufuneka zinike ubungqina bekhosi epheleleyo yesitofu esi-4 esaziwayo ngoku: iidosi ezi-2 zeOxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech okanye isitofu sokugonya seModerna, okanye idosi enye yesitofu esivelisiweyo nguJohnson noJohnson.
Iindwendwe ezigqibe ngeedosi ezimbini zeSinopharm okanye isitofu sokugonya seSinovac ziya kwamkelwa ukuba ziye zafumana idosi eyongezelelekileyo yesinye sezitofu ezine ezivunyiweyo eBukumkanini.
Saudi Arabia kuvulwe iwebhsayithi yewebhu iindwendwe zibhalise inqanaba lokugonywa. Indawo ifumaneka ngesiArabhu nangesiNgesi.
Abahambi abafika eSaudi Arabia kukwafuneka ukuba babonelele ngovavanyo olubi lwe-PCR olungathathwanga ngaphezulu kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokumka kunye nesatifikethi sokugonywa sephepha esivunyiweyo, esiqinisekiswe ngabasemagunyeni kwezempilo kwilizwe elikhuphayo.
Akukho mfuneko yokuvalelwa kwabahambi ukuya eSaudi.
Bonke abahambi abangena kwivisa yokhenketho ebikhutshwe ngaphambili bayakufuneka bahlawule imali eyongezelelweyo ye-SAR 40 kwisikhululo seenqwelomoya sokufika kwabo ukuze bahlawule i-inshurensi yazo naziphi na iindleko zonyango ezinxulumene ne-COVID-19.
Abahambi bacetyiswa ukuba bajonge iimfuno zokungena zangoku kunye nenqwelo moya abayikhethileyo ngaphambi kokuba bathenge itikiti.
Ngubani osekho kuluhlu olubomvu?
Ukukhupha amazwe ama-3 ukuba athathwe kuluhlu ngomso, la mazwe alandelayo akakwazi ukuya eBukumkanini.
Ukufumana ulwazi olungaphezulu, qha ga mshelana uncedo.visitsaudi.com.